Akhriso: DFS oo Amaro adag dhul dhigtay Ganacsatada dalka | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Akhriso: DFS oo Amaro adag dhul dhigtay Ganacsatada dalka
Muqdisho(HNN) Wasiirka Amniga gudaha dowlada Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo taliyeyaasha Nabad Sugidda Qaranka iyo Taliyaha Booliiska oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey go’aano ay soo saareen Golaha wasiirada Xukumada Soomaaliya kuwaasoo ku saabsan inaan wax taageero ah la siin Karin Al-Shabaab.
Wasiirka Amniga dowlada Soomaaliya ayaa xusay in ay dambi tahay nooca kasta oo taageero la siinayo Al-Shabaab sida ganacsi, siyaasad, qarin, xiriir, niyad u dhisid iyo wixii la mid ah cidii lagu helana ay dambiile loo aqoonsan doono ayuu yiri wasiirka Amniga.
Taliyaha Hey’adda Nabad Sugidda iyo sirdoonka Qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), ayaa dhankiisa sheegay in dhaqaale kala duwan ay Al-Shabaab hesho kuwaasoo loogu yeero magacyo kala duwan, sida taakuleyn, Zakawaad, ganaax iyo qaar kale ayna dhamaantood yihiin mamnuuc.
Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliya Jen. C/xakiin Daahir Saciid Saacid ayaa shirka jaraa’id ka sheegay in laamaha amniga ee dalka ay diyaar u yihiin cidii awaamiirtan jabisa in ay sharciga hor geeyaan.
Qodobada ka soo baxay laamaha amaanka ayaa waxay kala yihiin sidan:-
3-Ganacsatadu waxaa looga digayaa in ay taageeraan Al-Shabaab oo ay lacago siyaan.